Vola - Wikipedia
Ny taratasy fanamarinana momba ny 10,000 dollara amerikana, 1875.
Ny vola dia vita amin'ny taratasy na metaly atontan'ny fanjakana, ary manan-kery ao amin'io tany io mba ho sandan'ny entana vidiana. Ny fanjakan'ny tany tsirairay avy dia manamarika ny volany amin'ny sary sy soratra mba hampiavaka azy ireo.
Manana ny anjara toerany lehibe eo amin'ny firenena iray ny vola.
2 Karazan-javatra atao vola
3 Vola sandoka
Tamin'ny andro taloha, rehefa mividy na mivarotra, dia tsy maintsy manakalo ilay zavatra vidiana na amidy amina zavatra hafa mitovy vidy ; ny zavatra amidy na vidiana dia mety raha atao ho an'ny olon-kafa ; io fomba io dia tsy dia efikasy araka ny ohatra ho aseho eo :
Misy mpiompy iray miompy bengy ary mila varimbazaha izy mba hanao mofo. Ilay mpamboly varimbazaha dia tsy mila bengy ary noho izany tsy dia misy tombontsoa betsaka ilay fifanakalozana noho ilay mpamboly varimbazaha tsy mila bengy.
Mila bengy ho atao sakafo ny mpanefy, kanefa ny tsy mila fitaovana amboarin'ny mpanefy ny mpiompy bengy, fa ny mpamboly varimbazaha no tena mila ny fitaovana amboarin'ny mpanefy.
Amin'ny farany, raha te-hahazo varimbazaha ilay mpiompy, dia tsy maintsy manakalo ny benginy any amin'ny mpamboly izy, izay ilay mpamboly mila fitaovana vao afaka manakalo amin'ilay mpanefy.
Tamin'ny ankabeazan'ny fiara-monina voalohany nisy, ny olona dia nila nanakalo ny entana azo avy amin'ny ezany amina zavatra hafa. Noho izany, maka ny voankazo eo amin'ny tany izy mba hahafahany hahazo akanjo hoditra amin'ny alàlan'ny fifanakalozana, toy izany ny fomba nahaterahan'ny takalo. Ny olana amin'ny takalo, dia izy mila mahafantatra ny zavatra izay ilain'ny olona manodidina anatin'ny fotoana iray, noho izany, dia mety tsy mifanitsy amin'izay zavatra ilaina anaty ny fotoana iray ny takalo.
Ao amin'ilay ohatra nolazaina teo ambony, mety tsy nila voankazo ilay mpihazana fa kibay hazo. Ho sarotra inay ny fifanakalozana, satria mila mpiangoty iray vonona hanakalo ny voankazony ary mpanapaka hazo vonona hanakalo voankazo amin'ny kibay.
Karazan-javatra atao vola[hanova | hanova ny fango]
Betsaka ireo karazan-javatra efa natao vola. Anisan'ireo:
Vola azo atao entana
Vola taratasy azo avadika
Vola tsy azo avadika
Petra-bola any amin'ny banky
Ny vola azo atao entana dia azo ampiasaina amin'ny zavatra hafa izay tsy fifanakalozana, ka lazaina hoe manana sanda anaty, satria manana ny sandany manokana noho ny filana azy. Ireo karazana vola azo atao entana dia ny landy, ny biby fiompy sy ny volamena ary ny volafotsy. Ny vola azo avadika dia vola azo avadika volamena na volafotsy. Ny mari-pananana volamena na volafotsy dia azo avadika vola taratasy noho izy ireo azo avadika tanteraka ho volamena na volafotsy.
Ny vola tsy azo avadika dia vola tsy azo avadika ho volamena na volafotsy. Ny lelavola dia vola tsy azo avadika ary voadidin'ny governemanta ho vola. Izany no volam-pirenena azo ifanakalozana. Vola ampiasaina amin'ny petra-bola any amin'ny banky ny lelavola.
Ireo karazana petra-bola:
Mari-pananana azo iadiana varotra
Vola sandoka[hanova | hanova ny fango]
Ny vola sandoka dia vola naprinty na namboarina tsy nahazoana alalana avy amin'ny governemanta na ny fanjakana. Ny famokarana na ny fampiasana vola sandoka dia karazana hosoka. Nipoitra niaraka tamin'ny vola ny vola sandoka. Talohan'ny nanaprintiana vola taratasy, ny fomba fanaovana vola sandoka hita matetika indrindra dia ny fampifangaroana karazana metaly fototra amin'ny volamena na volafotsy ranoray. Misy ihany koa ny vola sandoka aprintin'ny fitaovam-printy ara-dalana ho valin'ny baiko hosoka. Tamin'ny Ady Lehibe Faharoa ohatra, dia namoaka vola sandoka livra britanika ary dôlara amerikanina ny alemanina. Ny vola sandoka dôlara amerikanina tsara kalitao indrindra hita amin'izao fotoana izao dia antsoina hoe superdollar. Efa misy ihany koa ny vola euro sandoka fa kely kokoa raha oharina amin'ny dôlara amerikanina.
Famotsiam-bola[hanova | hanova ny fango]
Ny famotsiam-bola dia fomba famadihana vola avy amin'ny heloka bevava (atao hoe "maloto") ho vola na fananana ara-dalana. Anefa kosa, tao anatin'ny rafitra ara-dalana sy mamoa-pitsipika dia nanjary voafehy tamin'ny endrika heloka bevava ara-bola hafa ny teny famotsiam-bola, ary indraindray dia ampiasaina matetika amin'ny fanararaotana ny rafitra ara-bola (tafiditra amin'ny zavatra toy ny antoka, vola dijitaly, kara-pandoavana, ary vola araka ny dikany nentim-paharazana), ao anatin'izany ny famatsiam-bola ny asa fampihorohoroana, ny fitsoahana hetra, ary ny fialana amin'ny sazy iraisam-pirenena.
↑ Counterfeit Cash – Fake Money: Stats Infographic
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Vola&oldid=993780"
Voaova farany tamin'ny 20 Jiona 2020 amin'ny 16:46 ity pejy ity.